Isticmaaluhu wuxuu sameeyaa "kaarka" nooca AirTag ah inuu ku haysto jeebkiisa | Waxaan ka socdaa mac
Waxa ugu horeeya ee aan sameeyay markii aan furay sanduuqa Airtag waa in la fiiriyaa haddii uu ku hayn lahaa jeebkiisa. Aad u dhumuc weyn, ayaan u maleeyay. Ugudambeyntiina, waxay kudhamaatay laalaadka guriga. Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay waxa isticmaale caqli badan u maleynayey, oo ka been abuur badan server, iyo daabacad 3D ah.
Marka xigta waxaan arki karnaa sida Andrew Ngai uu u kala furfuray aaladda AirTag, oo uu u dhex geliyay kaar caag ah, iyadoo batteriga la kala saaray. Sidaa awgeed, waxay ku guuleysatay inay yareyso dhumucdiisuna 3,8 mm., kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku keydiso boorsada jeebka sida kaarka deynta oo kale. Waxaan rajeynayaa in Cupertino ay fiiro gaar ah u yeeshaan.
Raadiyaha cusub ee Apple si macquul ah wuu u yaryahay oo waa fudud yahay, laakiin weli aad buu qaro weyn ugu yahay kuwa doonaya inay ku qaataan boorso. Sababtoo ah Apple waxay kaliya ku siisaa AirTag hal ikhtiyaar oo keli ah, Andrew Ngai waxay go aansatay inay sameyso nooc khafiif ah oo u gaar ah si ay ugu haysato boorsadeeda sida kaarka deynta. Dabcan waa inay iska siibto koofiyadda, daawashada hal-abuurkii cunuggu lahaa.
Waxa ay qabatay waxay ahayd in Motherboard-ka laga soo saaro kiiska caaga ah, oo batteriga si gooni gooni ah loogu xareeyo si dhumucda loo dhimo. Inta kale way fududahay. Wuxuu qaatay cabbiro loox iyo batariga, wuxuuna ku dul dhisay kaar Yazici 3D iyadoo labada aqal loo baahan yahay si loo waafajiyo labada qaybood.
Tani waa sida uu «Kaarka AirTag»Iyada oo kaliya 3,8 mm. qaro weyn, si buuxda u shaqeynaya oo shaqeynaya, oo si fudud loogu keydin karo gudaha jeebka jeebka, oo ay la socdaan kaararka deynta kale.
Waxaa laga yaabaa in Cupertino ay durba arkaan video, iyo in yar kadib waxaan arki doonaa Kaarka AirTag ee lagu qaato boorsada jeebka. Waxay noqon laheyd hoot.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Isticmaaluhu wuxuu sameeyaa nooca "kaarka" AirTag si uu ugu haysto boorsada jeebka
Sida loola wadaago muuqaal ka kooban Apple Watch